Wasiirka Qorshaynta Somaliland “Kama Qeyb-galayno Shirka Denmark Oo Ay Soomaaliya Nagu Marti-qaaday” | FooreNews
Home wararka Wasiirka Qorshaynta Somaliland “Kama Qeyb-galayno Shirka Denmark Oo Ay Soomaaliya Nagu Marti-qaaday”
Wasiirka Qorshaynta Somaliland “Kama Qeyb-galayno Shirka Denmark Oo Ay Soomaaliya Nagu Marti-qaaday”
Hargaysa (Foore)- Dawladda Somaliland ayaa mawqif cad iska taagtay, isla markaana qaadacday shirka la filayo in uu bisha dambe ka dhaco dalka Denmark, kaasi oo dhaqaale loogu ururinayo dawladda Soomaaliya.
Somaliland oo lagu soo casuumay in ay shirkaasi ka qayb gasho ayaa ku gacan saydhay marti qaad ay u fidisay dawladda Xamar ee waayuhu gabaanadeen, kaasi oo ay Somaliland ku tilmaantay in la doonayo in ay ka soo qayb gasho iyada oo qayb ka ah federaalka Soomaaliya.
Sidaasina waxa cadeeyay Wasiirka Qorsheynta iyo Horumarinta ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo shalay waraysi la yeelatay Laanta Af Soomaaliga ee BBC, isagoo ku sugan magaalada London, kana ka mid ahaa wasiiradii la socday weftiga madaxweynaha Somaliland hogaaminayay ee ka qaybgalay shirkii ku saabsanaa ganacsiga iyo maalgaashiga ee ka dhacay London.
Waxaanu tilmaamy in ay shirkaasi u gudbinayaan warbixin ay kaga hadlayaan baahiyahooda iyo waxyaabaha u mudan ee ay doonayaan in laga caawiyo, balse aanay marnaba Somaliland shirkaasi ka qayb gelaynin.
Wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi Somaliland lagu marti qaaday balse sababta ay u diideen ay tahay in ay Somaliland tahay dawladda xor ah isla markaana la siman dawladda Muqdisho haddii ay ka qaybgalaana ay muujinayso in Somaliland ay qayb ka tahay federaalka Soomaaliya.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu “Waa la nagu marti qaaday shirka bisha dambe ka dhacaya Denmark, oo dawladda Muqdisho ayaa nagu marti qaaday, laakiin marti qaadkaasi maanaan abqalin, shirkaasina qaab dhismeedka uu hadda leeyaay kuma tallo jirno in aanu ka qaybgalno, kana qaybgeli mayno. waayo annagu waxaanu isku aragnaa wadan xor ah oo la siman wadanka Soomaaliya, haddii aanu qaabka loo abaabulayaa taasi muujinaynin oo aanaan si siman uga wadda qaybgelaynin, ma aqbali karno in shirkaasi ay dawladda Muqdisho nagu marti qaado, oo Markaa loo akhristo in aanu nahay qayb federalka ka mid ah, waayo ma nihiin”.
Dr. Sacad Cali Shire, waxa uu sheegay inay qaban qaabiyeyaasha shirkaasi kala hadleen kuna wargeliyeen in aanay Somaliland shirkaasi ka qaybgelaynin, isla markaana ay ku qanceen markii ay u soo bandhigeen sababta ay u qaadaceen shirkaasi. waxaanu yidhi “Cidda shirkaasi qaban qaabinaysa waanu kala hadalnay, waananu u soo bandhignay, waanay naga garawsadeen, laakiin marti qaadka ay na siisay dawladda Soomaaliya shirkaasi ku tegi mayno. Maya dawladda Denmark gogosha ayuun bay fidinayaan, laakiin qabanqaabadda iyo iyo martiqaadka sida uu hadda u socdo, waxaa iska leh dawladda Muqdisho iyo hay’ada UN-ka”.
Previous Postxildhibaan xukuumada ku edeeyay in ay tahay kali ta lis Next PostXawaalada Oomar Global Oo Xawaare Layaab Leh Ku Socota Iyo Qurba Joogta Oo Lacagihii Ugu Badnaa Sanadkan Soo Marisay.